Soomaaliya Iyo Eritrea Oo Heshiisyo Kala Saxiixday Iyo Nooca Uu Yahay Heshiisku | Berberatoday.com
Soomaaliya Iyo Eritrea Oo Heshiisyo Kala Saxiixday Iyo Nooca Uu Yahay Heshiisku
Asmara(Berberatoday.com)-Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea oo saddexdii maalmood ee tagey ay wada-hadallo uga socdeen magaalada Asmara ayaa kala saxiixday heshiis afar qodob ka kooban, sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta Eritrea.
1-Soomaaliya waxaa lagu maneystay inay ku taal bar istaraatiiji ah iyo kheyraad daabiic ah. Si kastaba, waxay dhibaato kala kulantay ka faa’iideysashadooda sababo la xidhiidha dhibaato gudaha ah iyo faragelin dibedda ah. Sidaas darteed Eritrea waxa ay si xooggan u taageereysaa madaxbannaanida siyaasadeed, qarannimo iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya iyo sidoo kale dadaallada dadka iyo dowladda Soomaaliya ay kusoo celinayaan heerkii ay Soomaaliya xaqa u lahayd, iyo ku guuleysashada hadafyada ay dadka Soomaaliyeed ku faanaan.
2-Soomaaliya iyo Eritrea waxay isku dayi doonaan inay dhisaan xidhiidh aad u dhow oo siyaasadeed, dhaaale, bulsho, dhaqan iyo sidoo kale wada shaqeyn difaac iyo mid amni.
3-Labada waddan waxay aas-aasi doonaan xidhiidhdiblomaasiyeed ayaga oo is-weydaarsan doona safiiro, waxayna sare u qaadi doonaan xidhidhka ganacsi iyo kan maal-gashi, ayaga oo sidoo kale is-weydaarsan doona waxbarashada iyo dhaqanka.
4-Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay ka shaqeyn doonaan heshiis lagu xoojinayo nabadda gobolka, xisloonida iyo is-dhexgalka dhaqaale.